(၇)ရက်သားသမီးများအတွက် အောက်တိုဘာလ ဟောကိန်းများကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
« # သူတို့တွေ လွတ်မြောက်ကြတော့မည်
# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် »
# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင်Published October 3, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ယခုလအတွက် နာမည်တွင် - တနင်္လာ စ,ပြီး တနင်္ဂနွေ နှင့် သောကြာ နံဖြင့် ပိတ်ထားသူများ အထူးကံကောင်းနိုင်သည်။ တနင်္လာ အင်္ဂါ နှင့် ဗုဒ္ဓဟူးနံ များဖြင့် ပိတ်ထားသူများလည်း ကံဇာတာ ကောင်းနိုင်ပါသည်။ စနေ ၊ ကြာသတေး နှင့် ရာဟုနံ(ရ၊ဠ) များဖြင့် ပိတ်ထားသူများ ကံဇာတာ အညံ့ရှိသည်။
ယတြာပြုလိုပါက - သောကြာနေ့ တစ်နေ့တွင် သံဃာတစ်ပါးကို သင်္ကန်းတစ်စုံ ကပ်လှူဒါန်းလိုက်ပါ။
ယခုလအတွက် နာမည်တွင် - အင်္ဂါ စ, ပြီး တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္လာ ၊ အင်္ဂါ ၊ သောကြာ ၊ စနေနံများ ဖြင့် ပိတ်ထားသူများ ကံကောင်းမှုကို အထူးခံစားရနိုင်သည်။ ဗုဒ္ဓဟူး(ရာဟု) ဖြင့် ပိတ်ထားသူများ အကောင်း နှင့် အညံ့ ပူးတွဲ ခံစားရကိန်း ရှိသည်။ ကြာသပတေးဖြင့် ပိတ်ထားသူများ ပြဿနာ အမှုအခင်းများနိုင်သည်။ ရန်များနိုင်သည်။ သို့သော် ဆိုးဆိုးရွားရွား မဖြစ်နိုင်ပါ။ ယတြာပြုလိုပါက - တနင်္လာနေ့တစ်နေ့တွင် အိမ်ရှိဘုရားကို မုန့်ဟင်းခါး နှင့် ကြက်သွန်ကြော်ကို ကပ်လှူလိုက်ပါ။
ယခုလအတွက် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ကံဇာတာ အကောင်းဖက်တွင် ရှိသည်။ ငွေစုငွေပုံ ၀င်ကိန်း ရှိသည်။ ကွဲကွာနေသော ဆွေမျိုး မိသားစုများနှင့် ပြန်လည် တွေ့ဆုံကိန်း ရှိသည်။ အိမ်ထောင်ပြုရန် အစီအစဉ်ရှိသူများ ၀ါကျွတ်သည်နှင့် အိမ်ထောင်ကျကိန်း ရှိသည်။ မိမိလုပ်ငန်းများ တိုးတက်အောင်မြင်မည်။ အမြတ်အစွန်း ငွေကြေးများစွာ ရရှိနိုင်သည်။ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေသော အလုပ်များကို ပြန်လည် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မည်။ ခရီးသွားလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများ လွယ်ကူချောမောစွာ အဆင်ပြေမည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ခရီးထွက်ရကိန်း ရှိသည် (သို့) ပြည်တွင်းပြည်ပ ဘုရားဖူး ခရီးများ သွားရတတ်သည်။ စပ်တူ ဖက်စပ် (ရှယ်ယာ)လုပ်ငန်းများမှ အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ခံစားရမည်။ ဟော်တယ် နှင့် ခရီးသွားလာခြင်းလုပ်ငန်း ၊ ယာဉ်ကား တင်သွင်းသော လုပ်ငန်း ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားများ နှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်ရသော လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ ၊ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းရှင်များ အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ခံစားရကိန်း ရှိသည်။ သို့သော် “သက္ခတ်” ညံ့သော သူများတွင် အမှုအခင်း ပြဿနာများ နှင့် ကြုံတွေ့ရကိန်း ရှိတတ်သည်။ ယခုလအတွက် နာမည်တွင် - ဗုဒ္ဓဟူး စ, ပြီး တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္လာ ၊ အင်္ဂါ ၊ သောကြာ ၊ စနေနံများ ဖြင့် ပိတ်ထားသူများ ကံကောင်းမှုကို အထူးခံစားရနိုင်သည်။ ဗုဒ္ဓဟူး(ရာဟု) ဖြင့် ပိတ်ထားသူများ အကောင်း နှင့် အညံ့ ပူးတွဲ ခံစားရကိန်း ရှိသည်။ ကြာသပတေးဖြင့် ပိတ်ထားသူများ ပြဿနာ အမှုအခင်းများနိုင်သည်။ ရန်များနိုင်သည်။ ယတြာပြုလိုပါက - ကြာသပတေးနေ့ တစ်နေ့တွင် “မုန့်ဖက်ထုပ်” တစ်ထုပ်ကို တောင်းရမ်းစားသူတစ်ဦးအား ပေးကမ်းစွန့်ကြဲလိုက်ပါ။ .
ယခုလတွင် ကြာသပတေး သားသမီးများအတွက် ကံဇာတာ အကောင်း၊ အညံ့များ ရောထွေးနေတတ်သည်။ မိမိ အလုပ်အကိုင် ၊ ဘ၀အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်မှုများနှင့် ကြုံနိုင်သော်လည်း ကျန်းမာရေး ညံ့ခြင်း ၊ မတော်တဆ ထိခိုက် ခံရခြင်း ၊ အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာဖြစ်ခြင်း ၊ အိမ်ထောင်ဘက် ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းခြင်းများ ကြုံရနိုင်သည်။ စပ်တူ ဖက်စပ် လုပ်ငန်းများတွင် ရှယ်ယာဖက် အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုများ ကြုံရတတ်သည်။ ယာဉ်ကား နှင့် ပတ်သတ်သော ကိစ္စများတွင် (လောဘမသတ်နိုင်ပါက) အဆုံးအရှုံးများတတ်သည်။ အချို့သော ကြာသပတေး သားသမီးများတွင် “ထီပေါက်ခြင်း” (သို့) ထီပေါက်ခြင်းကဲ့သို့ ငွေဝင်ခြင်းများ ရှိနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် မသန့်ရှင်းသော လာဘ်ငွေများလည်း ၀င်ရောက်ကိန်း ရှိတတ်သည်။ မိခင်ဖြစ်သူ ကျန်းမာရေး ညံ့နိုင်သည်။ ငယ်ရွယ်သူများတွင် အချစ်ရေးကိစ္စများ အလွန်အဆင်မပြေ ဖြစ်တတ်သည်။ မိမိချစ်သူ နှင့် စကားများ ရန်ဖြစ်ကိန်းများ ရှိတတ်ပြီး အဆင်မသင့်လျှင် လမ်းခွဲရသည်အထိ ဖြစ်နိုင်သည်။ ယာဉ်ကား မတော်တဆဖြစ်မှုများ အထူးဂရုပြုပါ။ ယခုလအတွက် နာမည်တွင် ကြာသပတေး စ, ပြီး - တနင်္လာ ၊ အင်္ဂါ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ဖြင့် ပိတ်ထားသူများ ယခုလ ကံဇာတာ ညံ့ဖွယ်ရှိသည်။ စနေနံ ၊ ရာဟုနံများဖြင့် ပိတ်သူများ ငွေစုငွေပုံ ၊ လာဘ်ငွေများ ၀င်ကိန်း ရှိသည်။ ကြာသပတေး ၊ သောကြာ ၊ တနင်္ဂနွေ ပိတ်ထားသူများ ကံဇာတာ အကောင်းဖက်တွင် ပိုများနိုင်သည်။ ယတြာပြုလိုပါက - ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တစ်နေ့တွင် တန်ခိုးကြီးဘုရားတစ်ဆူတွင် “ရွှေသင်္ကန်း” ကပ်လှူပူဇော်လိုက်ပါ။
ယခုလတွင် သောကြာသားသမီးများအတွက် ကံဇာတာ ကောင်းမွန်မှု အထူးများနိုင်သည့် လ, တစ်လဖြစ်နိုင်သည်။ မိမိ၏ စိတ်ကူးကောင်း ၊ စေတနာကောင်း ၊ အကြံဉာဏ်ကောင်းများကို ဖော်ထုတ်ခွင့်ရမည်။ သားသမီး လက်အောက်ငယ်သားများ ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ လေးစားမှု ၊ ချီးမွမ်းမှုကို အထူးခံစားရကိန်း ရှိသည်။ မိမိ၏ ရဲဝံ့စွန့်စားလုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် မိမိနာမည် ဂုဏ်သတင်း မွှေးပျံ့မည်။ မိမိသားသမီးများ၏ လေးစားမှုကို အထူးရရှိမည်။ လုပ်ငန်းသစ်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ရကိန်း ရှိသည်။ သို့မဟုတ် လက်ရှိလုပ်ငန်းများကို တိုးတက်ချဲ့ထွင်ရတတ်သည်။ သို့သော် မိမိပိုင်ငွေကြေးအချို့ ဆုံးရှုံးကိန်း ရှိနေသည်။ လူလိမ်ခံရခြင်း ၊ လှည့်ဖျားခံရခြင်းများကြောင့် ငွေကြေး အချို့အ၀က် ဆုံးရှုံးကိန်း ရှိနိုင်သည်။ လူမျိုးခြား (သို့) ဘာသာခြား ဒုက္ခပေးခံရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ဘက် ကျန်းမာရေး ညံ့ဖျင်းတတ်သည်။ စပ်တူ ဖက်စပ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှု ၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုများ ကြုံနိုင်သည်။ ယာဉ်ကား နှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများတွင် ပြဿနာ အခက်အခဲများ တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။ မိမိထင်သလောက် အကျိုးအမြတ် မများဘဲ ရှိတတ်သည်။ ယခုလအတွက် နာမည်တွင် သောကြာ စ, ပြီး - တနင်္ဂနွေ ၊ အင်္ဂါ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၊ ကြာသပတေးဖြင့် ပိတ်ထားသူများ ယခုလတွင် ကံကောင်းမှုများ တိုးတက် များပြားနိုင်သည်။ သောကြာ ၊ တနင်္လာ ၊ စနေ ၊ ရာဟု နံဖြင့် ပိတ်ထားသူများ ပြဿနာများ ၊ ဆုံးရှုံးမှုများ ရှိနိုင်သည် (ကံအကောင်း/အဆိုးရောနိုင်သည်)
ယခုလအတွက် နာမည်တွင် - စနေ စ, ပြီး တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္လာ ၊ ကြာသပတေး ပိတ်ထားသူများ အထူးကံကောင်းနိုင်သည်။ အင်္ဂါ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၊ စနေ ပိတ်ထားသူများ ကံဇာတာ အဆိုး/အကောင်း ရောနှောနိုင်သည်။ သောကြာ နှင့် ၊ ရာဟုနံ ပိတ်ထားသူများ ကံဇာတာ အညံ့ပိုများနိုင်သည်။ ယတြာပြုလိုပါက - ကြာသပတေးနေ့ တစ်နေ့တွင် “ပဲပေါင်မုန့်” (၅)လုံးကို နေအိမ်ဘုရားတွင် ကပ်လှူပူဇော်ပေးပါ။
ယခုလအတွက် နာမည်တွင် - ရာဟုနံ (ရ ၊ ဠ ) စ, ပြီး အင်္ဂါနံ နှင့် ဗုဒ္ဓဟူးနံ ပိတ်သူများသာလျှင် ကံဇာတာ အကောင်းဘက် ပိုများ နိုင်သည်။ ကျန်နေ့နံ ပိတ်သူများ ကံဇာတာ ရှုပ်ထွေးနေမည်။ အထူးသဖြင့် သောကြာနံ နှင့် တနင်္လာနံ ပိတ်သူများ အထူးသတိပြု ပါ။ ကံညံ့မှု ပိုများနိုင်သည်။ ယတြာပြုလုပ်လိုပါက - ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်တွင် သခွားမွှေးသီး တစ်လုံးကို ဘုရားတွင် ကပ်လှူလိုက်ပြီး ညနေ (၆)နာရီ နောက်ပိုင်းတွင် ဘုရားစင်မှ စွန့်ကာ ဒါးဖြင့် ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး နေအိမ်၏ အရှေ့တောင် အရပ်သို့ သွားရောက်စွန့်ပစ်လိုက်ပါ။
အောက်ပါ နာမည်ဟောကိန်းမှာ နေ့သင့် နံသင့် အမည်ပေးမထားသူများ နှင့် အများဆုံး သက်ဆိုင်ပါသည်။ (နေ့သင့် နံသင့် နာမည်ပေးထားသူဖြစ်လျှင် အောက်ပါ တွဲလုံးများနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ) နေ့သင့် နံသင့် နာမည် ပေးမထားသူများမှာ ယခုလအတွက် ကံဇာတာ အထူးကောင်းနိုင်သည့် နာမည်တွဲလုံးများ နှင့် ကံဇာတာ အထူးညံ့ဖွယ် ရှိသည့် နာမည်တွဲလုံးများကို ရွေးချယ်ပေးထားပါသည်။ အကောင်းဆုံးတွဲလုံး နှင့် အညံ့ဆုံးတွဲလုံးများကိုသာ ရွေးချယ်ပေးထားခြင်းဖြစ်၍ အောက်ပါ နာမည်တွဲလုံး များထဲတွင် မိမိနာမည်တွဲလုံး ပါချင်မှ ပါလိမ့်မည်။ မိမိနာမည်တွဲလုံး မပါဝင်ပါက အထက်မှ (၇)ရက် သားသမီး အဟောများအတိုင်းသာ ယူရန်ဖြစ်ပါသည်။
တနင်္ဂနွေ - အ ၊ ဥ ၊ ဧ ၊ သြ =(၁) တနင်္လာ - က ၊ ခ ၊ ဂ ၊ ဃ ၊ င = (၂)
အင်္ဂါ - စ ၊ ဆ ၊ ဇ ၊ ဈ ၊ ည = (၃) ဗုဒ္ဓဟူး - ယ ၊ လ ၊ ၀ = (၄) ကြာသပတေး - ပ ၊ ဖ ၊ ဗ ၊ ဘ ၊ မ = (၅) သောကြာ - သ ၊ ဟ = (၆) စနေ - တ ၊ ထ၊ ဒ ၊ ဓ ၊ န ၊ ဌ ၊ ဏ = (၀) ရာဟု - ရ ၊ ဠ = (၈) - ဟု ယူထားပြီး တွဲထားပါသည်။ နေ့နံများကို ဂဏန်းသင်္ချာဖြင့် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ နာမည် ရှေ့ဆုံး နှင့် နောက်ဆုံး နေ့နံ နှစ်ခုကိုသာ ယူရမည် ဖြစ်ပြီး အလယ်လုံးများ မယူရပါ။
ထို့ကြောင့် ယခုလ(အောက်တိုဘာ)အတွက် - ကံဇာတာ အထူးတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖွယ်ရှိသော (ရှေ့ဆုံး+နောက်ဆုံး) နာမည်တွဲလုံးများ
Posted in မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် ဟောကိန်းများ, (၇)ရက် ဗေဒင်, ingaweikzar, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar zodiac, မြန်မာ့ ရိုးရာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်	15 comments on “# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင်”	moekyi on October 4, 2011 at 9:21 am said:
ဆရာ… တနင်္လာနဲ့တော့ပိတ်ထားတယ်..ကောင်းတဲ့ အတိတ်နမိတ်တွေလဲရှိနေတယ်..
MinMin on October 4, 2011 at 9:51 am said:
မှန်လိုက်တာ ဆရာ ….
မိမိချစ်သူ နှင့် စကားများ ရန်ဖြစ်ကိန်းများ ရှိတတ်ပြီး အဆင်မသင့်လျှင် လမ်းခွဲရသည်အထိ ဖြစ်နိုင်သည်။
ကြာသာပတေးသား အတွက်တော့ ကွက်တိကိုဖြစ်နေပါရောလားဗျာ …
ချောစု on October 4, 2011 at 10:25 am said:
red rose on October 4, 2011 at 1:52 pm said:
ခင်ခင် on October 5, 2011 at 12:52 am said:
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာရယ်။ မျှော်နေတာတော့သြဂုတ်လကုန်ကတည်းကပဲ ဆရာ့လည်းနားပူနားဆာမလုပ်ချင်တာနဲ့ ။ အခုမှပဲဝမ်းသာရတော့တယ်..ဆရာနဲ့ မိသားစုကျန်းမာပါစေ။
မေဇူး on October 5, 2011 at 8:51 am said:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ။ လာရောက်ဖတ်ရှု သွားပါတယ်နော်
saw on October 6, 2011 at 7:38 am said:
သူတို့ ကိုလည်း လွတ်စေခြင်ပါတယ်။ မြန်မာ ပြည်သူ၊ ပြည်သားတွေကိုလည်း တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတခုမှာ မှီးတင်းနေထိုင်နိုင်တဲ့ ဂုဏ်တခုကို တွေ့ ခြင်လှပါပြီဆရာ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆရာတင်ပေးတာတွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
khin on October 6, 2011 at 7:23 pm said:
ဆရာ ……မအားတဲ့ကြားက အခုလိုတင်ပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ။
ငြိမ်း on October 7, 2011 at 10:46 am said:
ဗေဒင်ဟောကိန်းတွေနဲ့ဆက်စပ်လို့ မရတဲ့ဘဝမျိုး ရောက်နေသူတွေ ကျွန်မတို့ တတွေလိုမျိုး ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ လစဉ်ဟောကိန်းဖတ်နိုင်တဲ့နေ့ မျိုးမြန်မြန်ရောက်လာပါစေ။ လူသားဆန်တဲ့ဘဝမျိုး ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါစေ။
Dr.Tin Bo Bo on October 7, 2011 at 10:57 am said:
“ဗေဒင်ဟောကိန်းတွေနဲ့ဆက်စပ်လို့ မရတဲ့ဘဝမျိုး . . ” ကောင်းလိုက်တဲ့ ဥပမာ ပေးလေး။ ဟုတ်တယ်။ ဒီလ ကံကောင်းတယ်ဆိုလည်း ခံစားခွင့်မရ ၊ ကံညံ့တယ်ဆိုရင်လည်း . . အင်း ဒါတော့ ပိုဆိုးမယ်ထင်တယ်။ ပြောရရင်တော့ “အသက်ရှင်လျှက်နဲ့ သေနေတဲ့ ဘ၀မျိုးတွေပါ” ။ သိပ်သနားစရာ ကောင်းပါတယ်။ အပြင်ဘက်က လူတွေကတော့ နေ့စဉ် သွားချင်ရာသွား၊ လာချင်ရာလာ၊ လည်လိုက်ပတ်လိုက် ၊ ၀ယ်လိုက်ချမ်းလိုက် နဲ့ ပျော်လို့ပါးလို့။
lattlatt on October 7, 2011 at 5:55 pm said:
သက် on October 23, 2011 at 8:30 am said:
ကြာသပတေးနံနဲ့ စထားတဲ့ ကဒါဖီတစ်ယောက်တော့ မတော်တဆဖြစ်ပြီး ဆုံးပါးသွားပြီ။ အမှန်တော့ သူပုန်ခေါင်းဆောင်က သတ်ဖုို့ ရည်ရွယ်မထားဘူး ပြောပါတယ်။ ပစ်တာ ဘယ်သူမှန်းတောင် မသိရသေးဘူး။ သူ့မွေးနေ့အတိအကျက ဘယ်သူမှ မသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။
Dr.Tin Bo Bo on October 23, 2011 at 8:51 am said:
ကြာသပတေးနံနဲ့စထားပေမယ့် ဒီ(၇)ရက်သားသမီးဟောကိန်းတွေက ယေဘူယျပါဘဲ။ ကဒါဖီ အသေဆိုးနဲ့ သေရတာကတော့ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့အတိအကျနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ကဒါဖီရဲ့ မွေးနေ့က ၁၉၄၂ ခု ဇွန်လ (၇)ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေ)သားပါ။ ဆရာ့ဆီမှာ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ် အားလုံးနီးပါးရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ် အမှန်တွေ ရှိပါတယ်။ ကဒါဖီဟာ (၂)ကြွင်း အထွန်းဖွားဖြစ်ပြီး အခုအသက်(၇၀) မှာ ကြာသပတေး(မရဏ)သက္ခတ်ထဲ ရောက်နေပါတယ်။ မနှစ်က စနေသက္ခတ်ထဲမှာကတည်းက နိမ့်လာခဲ့တဲ့ ကံဇာတာဟာ အခု ကြာသပတေး သက္ခတ်က အပေါက်ကနေ စောင့်ပြီး ရိုက်လိုက်တာပါဘဲလေ။ “ဒုက္ခပေးတဲ့ အင်္ဂါ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊စနေ” (Click Here)
သက် on October 26, 2011 at 4:10 am said:
Nancy Lin on November 16, 2011 at 6:36 am said:
I like your Baydin and I am one of your reader. Can I ask about my life? Can your do that? How can I ask? Please e-mail me.I don’t have burmese fount.
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,733)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,971)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,802)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,371)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,429)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,574)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,595)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,959)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,298)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,273)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,104)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,051)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,841)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,803)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,303)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,135)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,835)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,494)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,185)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,177)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,828)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,683)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,618)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,551)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,263)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,244)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,907)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,693)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,478)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,025)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !